ठाेरीमा सुरक्षा बढाऔं ,भारतकाे ठुलाे च’लखेल हुन सक्छ ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
ठाेरीमा सुरक्षा बढाऔं ,भारतकाे ठुलाे च’लखेल हुन सक्छ !
नेपालका प्रधानमन्त्रि ओली ले दिएको रामको जन्मस्थानको बारेको बयान अहिले नेपाल र भारतमा निकै नै चर्चको बिषय बनेको छ ।
यति मात्र हैन भारत का ठुलठुला मिडिया हाउसहरुले बयान दिएको दिनबाट नै बहस कार्यक्रम र ब्रेकिंग न्यूज दिईरहेका छन भने ईतिहाँस बि,दहरुलाई पनि कार्यक्रममा जोड्दै जानकारी दिईरहेका छन ।
नेपालमा पनि उक्त बयान दिईसकेपछि सरकार सक्रिय भएर स्थानीय तह, जिल्ला समिति , पुरातत्व बिभाग र बिभिन्न सरकारी निकायहरुको ध्यान अ,नुसन्धानमा गएको छ । त्यति मात्र हैन माडि नगरपालिकाका जन प्रतिनिधि र त्यहाँका जनता पनि लागिपरिरहेका छन ।
नेपालसँग प्र,माणित गराउन धेरै प्रमाणहरु भएको पुरातत्व तथा ईतिहाँस बिधहरु जनाउँछन । एक माडिका स्थानिएका अनुसार उक्त छ्येत्रमा भुमि उत्खनन गर्दा, बाटो बनाउदा साथै खेत सम्याउदा रामको पालाका सिक्का र मुर्ति देखिने गरेका थिए’, ; यस बाट पनि थाहा हुन्छ कि नेपाल मा केहि त्यस्तै अझै बाकि छ जुनले प्रमाणित गर्न सकोस कि राम नेपाली हुन ।
Previous पार्टीमा वि वाद् होइन, जनताको चि न्ता गर्ने बेला हो : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली…हेर्नुहोस।